Takio ny kitapo Cooker Cook Keto Slow Cooker - Fitness Rebates
Home » Book » Mangataha Cooketo Cook Keto Slow Cooker maimaim-poana
Mitady sakafo manandrana matetitetika matetitetika izay azonao atao miaraka amin'ny mpahandro mangatsiaka? Marina fa manana vaovao tsara ho anao izahay. Kelsey Ale sakaizanay dia manolotra ny bokotra Keto Slow Cooker Cooker vaovao ho an'ny olona 500 voalohany! Ity Cookbook ity mirakitra ny sakafo maraina keto hanina, antoandro, ary sakafo hariva manandrana mahafinaritra!
Ao amin'ny Beta Cooker Keto Slow Cooker dia hahazo ny famonon-tsakafo matavy 80 mandoro matavy ianao. Tafiditra ao ambany eto ny sasany amin'ireo sakafo matetitetika matetitetika azonao atao.
Saika ny fitsipiky ny ketogen rehetra dia azo atao ao anatin'ny 15 minitra satria mampiasa mahandro malefaka izy ireo. Ny mpahandro mampiadana iray dia manala ny adin-tsaina sy aretin'andoha tafiditra amin'ny fandrahoan-tsakafo ary manolo-kevitra anao izahay fa hividy iray ianao raha tsy manana ilay milina fitehirizana fotoana ity.
Tolotra ho an'ny fanomezana manokana:
Raha mandidy ianao anio dia ho azonao ny fanomezana fanomezana FREE 3! Ho fanampin'ny Keto Slow Cooker Cookbook dia azonao ireto fanomezana 3 ireto miaraka amin'ny baikonao:
The Keto Masera sy Boky Fividianan-tsakafo…
ary ny drafitry ny sakafo 7 andro sy ny lisitry ny fiantsenana…
Aza miandry! Alao ny dikao avy amin'ny Keto Slow Cooker resep-nao ho an'ny tenanao anio! Ny hany tsy maintsy andoavanao dia sarany kely amin'ny fandefasana sy ny fikarakarana.
Kitiho eto mba takio ny FREE Keto Slow Cooker Cookbook
Tsy mbola manana mpahandro ve ianao? Ireto misy sasantsasany amin'ireo mpamaky lambam-pandeha ambony azo alaina any Amazon